Ciidanka gaarka ee DDS ayaa ku qabtay tuulada Gogti ee degmada Harawo rasaas fara badan. - Hargeele - Wararka Somali State
Ciidanka gaarka ee DDS ayaa ku qabtay tuulada Gogti ee degmada Harawo rasaas fara badan.
Ha’yadaha amaanka DDS gaar ahaan ciidanka Liyuu booliska ee ku sugan tuulada Gogti ee degmada Harawo ayaa gacanta ku dhigay Rasaas la doonaayay in si qarsoodi ah lagu soo galiyo dalka rasaastan oo dhan 14,448 midh oo rasaasta qoryaha Ak 47 ka.
ayay ciidanku ku qabteeen laba gaadhi oo ay baadhayeen oo ka soo gudbay dhanka xuduuda Somaliland rasaastan ayeyna sheegeen in lagu wadey Dir dhaba iyo Itoobiyada dhexe.
waxaana nooga waramay hananaanka lagu qabtay rasaastan gashaanle Asad CumAr Cabdi oo ka mida saraaskiisha ciidanka gaarka ah ee fadhigoodu yahay goobta lagu qabaty rasaasta
Many Somali speakers in Finland have no Finnish friends, finds survey – Helsinki Times
Ethiopia: Strategic Planning Officer – Volunteer in Ethiopia (All Nationalities)
Shirka madasha wadatashiga Af-hayeenada golaha xildhibaanada degmooyinka, iyo maamul magaalooyinka DDS.
Ciidamada amniga DDS ee gobolka Doolo oo gacanta ku dhigey gaadhi ay saaraayeen walxaha qarxa.
Wasiir ku xigeenka xafiiska jidadka iyo gaadiidka oo wareysi siiyey warbaahinta deegaanka.